Manchester United oo shaqada ka ceyrisay tababare Jose Mourinho - Halbeeg News
Kooxda Manchester United ayaa shaqada ka ceyrisay tababare Jose Mourinho kadib guuldaradii ay kooxda kala kulantay garoonka Anfield ee ay kula ciyaartay kooxda Liverpool.
Jose Mourinho ayaa soo gabagabeeyay muddo xileedkiisa tababarenimo oo soo bilaabatay bishii May 2016-kii.
Bilow aan wanaagsaneyn oo ay kooxda soo bandhigtay kal ciyaareedkan ayaa kooxda Manchester United hoos uga riday 19 dhibcooda hoggaanka horyaalka Ingiriiska oo ay hogaamineyso kooxda Liverpool iyadoo sidoo kalena ka dhacday tartankii ay ugu jirtay in ay boos ka hesho afarta kaalin ee horyaalka ugu sareysa.
Manchester United ayaa hal mar oo kaliya badisay lix ciyaarood ee ay ka ciyyartay horyaalka iyagoo sidoo kale barbar dhac la gashay kooxaha Southampton iyo Crystal Palace.
Kooxda Manchester United ayaa war ay soo saartay ku sheegtay in tababare Jose Mourinho uu shaqada ka tegay sababo degdeg ah.
“Kooxda Manchester United waxa ay Jose Mourinho uga mahad celinayaa xiligii uu Manchester ku qaatay waxaan mustaqbalkiisa u rajeynayaa guul, tababare shaqada sii wada ayaa la magacaabi doona inta xili ciyaareedkan ka harsan iyadoo tababare rasmi ah la qaadan doona dhammaadka xili ciyaareedka” ayaa lagu yiri warkan ka soo baxay kooxda Manchester United.
Xiriirka tababaraha iyo ku xigeenka Guddoomiyaha fulinta Ed Woodward ayaa xumaa kadib markii kooxda ay ka gaabisay soo iibsashada daafaca dhexe xagaagan, Mourinho ayaa Ciyaariyahanno badan bartilmaameedsaday xagaagan balse waxba lagama badalin ciyaarahanadii iyo qaab ciyaareedkii xilli ciyaareedki hore.
Laba xili ciyaareed oo uu Mourinho Manchester joogay waxa uu ku guuleystay koobka Europe League iyo FA Cup-ka Ingiriiska.
Tababare Zinedine Zidane ayaa laga yaabaa in uu noqdo tababaraha xiga ee Manchester United kadib go’aankiisii kediska ahaa ee iskaga casilay shaqadii tababarenimo ee uu ka hayay kooxda Real Madrid oo kula guuleystay 3 Champions League.